Siyabathanda abantu abanikela ngexesha kunye nemizamo yabo yokwenza umhlaba ube yindawo eyonwabileyo kunye nemveliso ngakumbi. Leyo yinjongo efanelekileyo. Ukuphela kwethu apho senza isoftware enceda abantu baphumeze iinjongo zabo.
I-Plum Amazing, i-Llc yinkampani yase-US esekwe kwilizwe jikelele egxila kwi-shareware yesoftware kunye nedesktop kunye nezicelo zorhwebo ukusukela ngo-2007 nangaphambi koko phantsi kwegama iScript Software emva konyaka ka-1995.
Isoftware yeScript yeSoftware yokuqala yayixhaswe yi Umatshini obuyela umva kwi-Intanethi ngo-1997. Ukuhlaziswa ngokupheleleyo yimigangatho yanamhlanje kodwa khumbula ukuba le yayiyinkulungwane yokugqibela.
I-Plum emangalisayo igxila ekwenzeni imveliso kunye nesoftware enefoto ye-iOS, OS X, Android kunye yeWindows. IPlum Amazing yinkampani ebucala e-US kodwa ineeofisi kwihlabathi jikelele. I-domain plumamazing.com yafunyanwa ngoMgqibelo, nge-23 kaFebruwari 2008.
I-Plum emangalisayo zokusebenza kuthengiswa ikakhulu kwi Ivenkile yePlum emangalisayo Apha.
Plum Iziphumo zokusebenza ngoku ezithengiswayo kwi Ivenkile yeApple App ilapha.
I-Plum emangalisayo zokusebenza okwangoku ezithengiswayo kuyo Ivenkile yeGoogle Play ilapha.
Phakathi kwesityalo sangoku sePlum Amazing iimveliso zesoftware ezithengiswe kwiPlum Amazing site ziiCopyPaste ®, yKey (eyayibizwa ngaphambili iKey), iClock ®, iWatermark®, Essential, PixelStick, SpeechMaker, PhotoShrinkr, uMphathi weVolumu, iTinyCal, iTinyAlarms.
IPlum emangalisayo ikwadala ukuba isiteshini sikanomathotholo esiteshini se-iPhone / iPad / AppleTV kunye ne-Android sifumaneke kwi-iTunes naseGoogle Play. Izikhululo ezininzi kumazwe amaninzi zithengile iinkqubo zokusasaza ezenziwe ngokwezifiso ezivela kwiPlum emangalisayo kwaye ziyonwabele ukwanda kwabaphulaphuli Iiapps ezifana Swag 104.9, Alice 96.5, The River 103.7, Reno CBS Sports Radio 96.1 kunye 1270, Ten County 97.3 FM, Muskegon Radio 100.9 FM, 1580 KGAF Gainesville Radio, 106.9 More FM, News WCRN News Talk Radio 830, Little City 97.3, iRadio I-Tampa Bay, irediyo ye-OM e-Singapore, ZMix97, i-Stinger, i-Abilene Radio, Irediyo ye-180 ngoku kunye nezinye ezininzi.
IPlum Amazing ikwangumenzi weemveliso ezithengiswe kwezinye iinkampani ezinje ngeView kunye neView Media Pro (ethengiswe kwaMicrosoft eyathengiswa nguMicrosoft kuPhaseOne), ChatFX (edityaniswe kwi-iChat kwinkqubo yokusebenza kweTiger yiApple), idTunes (yeyiphi id iingoma ezirekhodiweyo ngomsindo kunye nokuziphawula), iSearch, iCount, EasyCard (ngoku eneOhana Software), iProjectTimer kunye neKidPix (ethengiswe kwiMiSoft).
IPlum emangalisayo iyila kwaye ithengise eyayo isoftware kodwa iyayenza nomsebenzi wophuhliso (inkqubo) kwezinye iinkampani. Amaqabane ethu / uluhlu lwabathengi Apha. Ukuba ufuna ukuba ne-iPhone entle, i-iPad, iMac, iWin okanye usetyenziso lwe-Android eyenziweyo nceda zoqhagamshelwano nathi. Siyavuya ukuxoxa ngezimvo zakho, inqaku kunye nexesha.
I-Plum emangalisayo liqela labantu abanezakhono zombini kwaye banomdla kakhulu kubuchwepheshe. Abantu basasazeke kwihlabathi liphela kodwa sisebenza kunye kwiiprojekthi ezahlukeneyo sisebenzisa ubuchule bethu ngeendlela ezahlukeneyo.
Sifuna ukwenza ngaphezulu. Ukuba ungathanda ukuxhasa iiprojekthi zethu ngokubanzi nceda unxibelelane nathi.
"Into oyiyo yile nto ubuyiyo, kwaye uza kuba yile nto uyenzayo ngoku." -UBuddha